५ वर्षदेखी दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्ने कलंकी-नागढुंगा सडक (भिडियोसहित ) - TV Annapurna
July 29, 2018 October 16, 2018 Annapurna TV
टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौँ ।
साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७१ साउनबाट निर्माण थालिएको कलंकी– नागढुंगा सडक अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । नागढुंगा–कलंकी सडक खण्डको जम्मा लम्बाइ जम्माजम्मी ९.१ किलोमिटर मात्र हो । तर, देशको राजधानीलाई देशका बाँकी भागसँग जोड्ने यो सडकखण्डको दुरी पार लाग्ने लाग्नुपर्ने समय जम्मा १५ मिनेट हो तर, तर, हरेक दिन यो बाटो आवतजावत गर्न कम्तीमा एक घण्टादेखि तीनघण्टासम्म लाग्नेहरु बसका चालक र यात्रुहरुको गुनासो छ । त्यसो त उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा भोगिरहेको यो सास्ती नयाँ होइन, वर्षौं पुरानो हो । केही समयअघिसम्म साँघुरो सडकमा अत्यधिक सवारी साधनको चापले ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका उनीहरू पछिल्लो समय नागढुंगा–कलंकी सडक विस्तारको सकस भोगिरहेका छन् ।
चार लेनको सडकबीचमा ग्रीनबेल्ट र सडकको दुवै तर्फ साइकल लेन हुने भनिएको उक्त सडक खण्डमा ठूलठुला खाल्डा मात्रै छन् । पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धूलो उड्ने कारण स्थानीयहरु घरभित्र बस्नै नसक्ने अवस्था छ । सडक छेउछाउका स्थानियहरुले सडक निर्माण गर्न पटकपटक सरकारको ध्यानार्षण गराइरहेका छन् । केही महिनाअघि मात्रै नागढुंगाका स्थानीयले चक्काजाम नै गरेर सडकको दुरावस्था छिटो अन्त्य गर्न माग नगरेका होइनन् । सडक विस्तारका नाममा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्न भन्दै उनीहरुले सडक विभाग र ठेकेदारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझए । सांकेतिक विरोधस्वरुप सडकमा रोपाईं समेत गरे । तै पनि समस्या जस्ताको तस्तै भएको स्थानीयको गुनासो छ । बाटो नै नदेखिने गरी धुलो उड्दा सवारी चालकहरु यो क्षेत्रमा दिउसै लाइट बालेर सवारी चलाउन बाध्य छन् । दिउसै लाइट बाल्नुपर्ने यो बाध्यकारी अवस्थाले पनि यो सडकको दुरावस्था झल्काउँछ ।
के भन्छन त सर्बसाधारण ?
कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डको सडक छेउमा व्यापार गर्दै आएका रबि थापा पसलमा बस्दा सधैँ मास्क लगाएर बस्छन् । उनले सतुंगलमा किराना पसल सञ्चालन गर्न थालेको ४५ वर्ष भयो । कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड विस्तारको काम शुरु भएदेखि उनको काम व्यापारभन्दा पनि बढार्ने बढी भएको छ । बुधबार दिउसो १ बजे हामी त्यहाँ पुग्दा उनी पसलअगाडि कुचो चलाइरहेका थिए । ‘पसलमा मान्छे आउँदैनन्, धुलो मात्रै आउँछ । यही धुलो बढार्दैमा दिन जान्छ,’ उनले हामीसँग दुखेसो पोखे । धुलोको कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परिरहेको उनले सुनाए । धुलोको कारण रुघा खोकी लाग्ने व्वरो आउँने जस्ता समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘पसलमा मात्रै होइन, कोठामा पनि धुलो पस्छ,’ उनले भने, ‘श्वास फेर्न पनि गाह्रो छ, सुत्दा समेत मास्क लगाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’
सडक खण्डको छेउछाउमा बस्ने र दैनिक पैदल हिड्नुपर्ने स्थानीयको दैनिकी झनै कष्टपूर्ण बनेको छ । ‘धुलोका कारण बाटोको अवस्था दयनीय छ, धुलोले बाटो देखिँदैन, अत्याधिक जाम हुन्छ, बाहिर पनि निस्कन मन लाग्दैन’ ठूलो भारी बोकेर पैदल हिडदै गरेकी ५० बर्षिया राधा महर्जनले भनिन् । सतुङ्गलमा गाडी कुर्दै बसेकी कमला अधिकारीको दुखेसो पनि उस्तै पीडादायी छ । ‘निकै धुलो छ, धुलोले आँखा पनि हेर्न हुन्न’ उनले भनिन्, ‘अलिकति हिँड्दा पनि कपडा धुलाम्मे हुन्छ, घरमा पनि उत्तिकै धुलो छ, राम्रोसँग श्वास फेर्न पनि पाएका छैनौं ।’
के भन्छ त सडक बिभाग ?
आयोजनाका प्रवक्ता इन्जिनियर विश्व विजयलाल श्रेष्ठ स्थानीयको लगातारको अवरोध तथा अदालतको आदेशका कारण नागढुंगा–कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कलंकी नागढुंगा सडक खण्ड सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ । धुलो र हिलो कम गर्न र ढिलाइलाई अन्त्य गर्न आफूले केही वैकल्पिक उपाय अपनाउँने योजनामा उनी छन् । तर, बिडम्वना देशका झण्डै ५० लाख मानिसहरु बसोबास गर्ने र देशलाई बाँकी भूगोलसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्नका लागि एकैपटक सयौं कामदार लगाइदैन । छिटो सडक निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधिका यन्त्र पनि प्रयोग गरिंदैन । दिनको हजारौंको संख्यामा गाडी ग्ड्ने यत्तिको महत्वको सडक निर्माणका लागि दुई चार जना सडका खनिखोस्री गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, पनि जिम्मेवार तहमा बसेका पदाधिकारी गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् ।
अनन्तको विश्व कीर्तिमानको तयारी तीव्र, विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगको घोषणा